Iimaphu zikaGoogle ziya kukubonisa zonke iinkcukacha zeendawo ozithandayo | I-Androidsis
Kwakhona u-G omkhulu uyabuya Iindaba kwiimephu zikaGoogle, Ukusetyenziswa kwayo. Kwaye ngeli xesha liza kwizixhobo zethu ze-Android ngohlaziyo ngokungathandabuzekiyo oluphucula usetyenziso kakhulu iimaphu zikagoogleUkusukela ngoku ukuza kuthi ga ngoku sizokwazi ukwenza oku kulandelayo kwiindawo esizithandayo, nokuba ziivenkile, iivenkile, iivenkile zokutyela, amagumbi okuphumla, njl.
Namhlanje omkhulu uG, upapashe kweyakhe website esemthethweni ukuba kungekudala siza kuba nohlaziyo olukhoyo ukonwabela oko, kwaye kunjalo Iimephu zikaGoogle ziya kusinika ulwazi ngakumbi nangakumbi ukuze sazi kwaye sifumanise malunga namashishini esiwathandayo. Eli nqaku liza kusinika zonke iintlobo zeendaba malunga nendawo esinomdla kuyo. Okwangoku sinokwazi indawo ekuyo, ukuvula kunye nokuvala iiyure, izimvo zoluntu, amanqaku, njl. Kodwa ngoku sinokwazi malunga nokunikezelwa, ukunyuselwa kunye nokunye okuninzi.
Olu hlaziyo lweMaphu zikaGoogle ziya kufumaneka kuqala kwi-Android
Kwaye uya kuzibuza, singafikelela njani koku ukhetho lokulandela kwiMaphu zikaGoogle? ilula kakhulu: i-navigator ye-Mountain View-based giant iya kuba nethebhu ebizwa ngokuba "yeyakho" eya kuthi isindise zonke iindawo ezinomdla ebesikhethe ukuzibeka esweni ngaphambili. Ukongeza kolu phawu lumnandi, kuyenzeka ukuba udibane nendawo eza kuvulwa kwakamsinya kwiinyanga ezi-3.
Kwaye olu khetho luvula amathuba angenasiphelo, njengokufumana ngezaphulelo kwiivenkile zeempahla, kwiivenkile ezinkulu, kwimisitho kwindawo esithandayo okanye ibhari, kumagumbi emidlalo nokunye okuninzi. Ngaphandle kwamathandabuzo luphuculo olukhulu lweMaphu zikaGoogle. Ukuze konke oku kwenzeke, abaniniyo kuya kufuneka bavule iProfayili yeShishini, apho baya kupapasha yonke into enxulumene nendawo yabo ukuze bazazise phakathi kwabasebenzisi be-Android, nanjengoko besesitshilo ngaphambili, ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-3 kwangaphambili.
Ngoku kufuneka silinde de uGoogle ahlaziye usetyenziso lwayo oludumileyo lwe-GPS ukuze sikwazi ukonwabela kwaye kude kube ngoku siza kuqhubeka nokusebenzisa iimaphu zikagoogle isalathiso sendawo kunye nokunye. Ukongeza, kwaye inokuba yintoni enye into, i-Mountain View-based giant iya kuqalisa ukuhlaziywa kweGoogle Maps kuqala kwii-terminals ze-Android kwaye kamva, awukho umhla osemthethweni, kumadivayisi e-iOS.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Iimaphu zikaGoogle zifuna ukuba ungalahli iinkcukacha zeendawo ozithandayo